ဆုံမှတ်များကဘာတွေလဲ။ - Cazoo
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » ဆုံမှတ်များကဘာတွေလဲ။
tag ကို: Bitcoin core ကို, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain, ပေါ့ပါးသော client, ဆက်သွယ်ရေးအဆုံးမှတ်, နှစ်ဆအသုံးစရိတ်, အပြည့်အဝ node များ, အပြည့်အဝအတည်ပြု node များ, ရေတံခွန်, နားထောင်ခြင်း node များ, Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေး, မိုင်, ရေကူးကန်သတ္တုတွင်း, အပြည့်အဝ node ကိုရေကူးကန်မိုင်းလုပ်သား, ရိုးရှင်းသောငွေပေးချေမှုအတည်ပြုချက် (SPV), မိုင်းတွင်းသာ, စူပါ node ကို
စာဖတ်ချိန် -5minuti
node တစ်ခုသည်၎င်း၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ကွန်ယက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများလောက၌၊ node များသည်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည် - ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ခွဲဝေရေးအမှတ်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအဆုံးမှတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပြောနိုင်ပါတယ် node ဆိုသည်မှာ network network တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလက်လွတ်မခံနိုင်ရန်အတွက် virtual node များအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသီးခြားဖြစ်ရပ်များလည်းရှိသည်။
ဒီဟာကကောင်းတယ် Network node ဆိုသည်မှာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်၊ လက်ခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပေးပို့နိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Bitcoin Node အမျိုးအစားများရှိသည်။ အပြည့်အဝ node များ၊ super node များ၊ miner node များနှင့် SPV client များ။
Bitcoin node များ
အပြည့်အဝ node များ
နားထောင်ခြင်းဆုံမှတ်များ (Super Node များ)
Miner Node များ
ပေါ့ပါးသောသို့မဟုတ် SPV သုံးစွဲသူ
လိုင်း vs သတ္တုတွင်း node များ
Blackview Smartwatch၊ Mens Womens Fitness Tracker Watch၊ 1,69″ သာမိုမီတာ/ Pulse Oximeter (SpO2)/ Pedometer/ Heart Rate Monitor/ Message အကြောင်းကြားချက်များ၊ အားကစားအတွက် အိပ်စက်ခြင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး
DVB-T2 HD ဒီကုဒ်ဒါ EDISION PICCO T265 Full HD ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်းနေလက်ခံသူ DVBT2 H265 HEVC 10 Bit အပိုဆု TV၊ FTA၊ USB၊ HDMI၊ SCART၊ IR Sensor၊ USB WiFi ပံ့ပိုးမှု၊ 2in1 Universal Remote Control၊ Main 10
USB Type-C ကြိုး၊ INIU USB A မှ USB C 3,1A Cable အမြန်အားသွင်းခြင်း [3Pcs / 0,5 +2+ 2m] Alloy Braided Nylon QC 3,0 Type C Cable iPad အတွက် Xiaomi Huawei Samsung S21 Pixel OnePlus Realme Switch ETC။
TAP-TRAP® - ထောင်ချောက်ထုပ် - စစ်မှန်သောဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု
Naramaki® Anti Ants Vape Insecticide - အထုပ် ၂ ထုပ်
Ooni Koda 16 ပြင်ပဓာတ်ငွေ့ပီဇာမီးဖို
Home Defense KB သနပ်ခါး Gel Tube 30 & nbsp; g, Red, 11 & nbsp; x 2,6& nbsp; x 21 & nbsp; cm & အိမ်သုံး FORMINIX Bait ANTS GRANULAR ကိုကာကွယ်ပါ။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း အသိုက် 200g၊ ပန်းရောင် Granule
Blockchain အားစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်နေရာဖြစ်သည် ဖြန့်ဝေခဲ့သည်, node များကွန်ယက်တစ်ခုသည် Bitcoin အားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသော peer-to-peer (P2P) ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၊ အလွန်အကျွံမသုံးနိုင်သောနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူများအကြားကုန်သွယ်မှု၊
I blockchain node များ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဆက်သွယ်ရေးအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဂုဏ်သတ္တိများအချို့ရှိရမည်။ မည်သည့်စက်ကိုမဆို ကွန်ပျူတာလို Bitcoin Interface နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်၊ တစ်ထုံးစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အားလုံး node များဟာ blockchain အတွင်းချိတ်ဆက်ကတည်းက။ ဒီထုံးတွေဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ သူတို့ဆက်သွယ်ကြတယ် သူတို့က Bitcoin ၏သက်တူရွယ်တူပရိုတိုကောနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်များနှင့်၎င်း၏ဖြန့်ဝေထားသောကွန်ပျူတာကွန်ယက်၏လုပ်ကွက်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်သည်။ မျက်လုံး: Bitcoin node အမျိုးမျိုးရှိသည်.
အပြည့်အဝ node များသည် Bitcoin လုံခြုံရေးနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုထောက်ပံ့ပေးသောသူတို့အား node များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် network တစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်နေရာရာကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ သူတို့ကိုခေါ်သည်ကိုသင်မြင်ဖူးပြီ အပြည့်အဝအတည်ပြု node များဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုခေါ် အရောင်းအများနှင့်သော့ခတ်အတည်ပြု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကချမှတ်ခဲ့သောစည်းမျဉ်းများအရသိရသည် ခွင့်ပြုချက် စနစ်၏။ အပြည့်အဝ node များသည်အသစ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်လုပ်ကွက်အသစ်များကို blockchain သို့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် node အပြည့်တစ်ခုသည် blockchain တစ်ခုလုံး၏မိတ္တူတစ်ခုနှင့်၎င်း၏လုပ်ကွက်များနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်။ (၎င်းသည် node အပြည့်အ ၀ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်လိုအပ်ချက်မဟုတ်လျှင်တောင်မှ blockchain ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပင် download လုပ်နိုင်သည်) ။
အမျိုးမျိုးသောဆော့ဝဲလ်အကောင်အထည်ဖော်မှုများအပြီးတွင် Bitcoin အပြည့်အဝ node တစ်ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုလူသိအများဆုံးလူသိများသည် Bitcoin Core (ဒီမှာကသူ့ github များအတွက် link ကို)။ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ ဤနေရာတွင် Bitcoin Core အပြည့်အဝ node ဖြစ်ရန်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သောအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက Windows, Mac OS X သို့မဟုတ် Linux ဗားရှင်းဖြင့် Desktop သို့မဟုတ် laptop ။
200GB အခမဲ့ disk ကိုနေရာ။
အနည်းဆုံး 50 kB / s ဖြင့်တင်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။
အကန့်အသတ်မရှိဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်မြင့်မားသောတင်ပို့မှုကန့်သတ်ချက်များဖြင့် သို့မဟုတ်သင်၏အကောက်ခွန်အစီအစဉ်တွင်၊ သင် hotspots ပြုလုပ်ပါကတစ်လလျှင်ဂိဂ္ဂူ ၂၀၀ နှင့် downlaod တွင် ၂၀ ပါဝင်သည်။
node အပြည့်အစုံသည်အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်လေးပုံတစ်ပုံ (၆ နာရီ) အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေဆဲဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဖြစ်သည်။
ထောင်နှင့်ချီသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် node များအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက် Bitcoin ဂေဟစနစ်ကိုကူညီရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ယနေ့ (မေလ 2021) ၏အဖြစ်ကျနော်တို့ရေတွက် 9615 တက်ကြွအများပြည်သူ node များ အဆိုပါ Bitcoin ကွန်ယက်၌တည်၏။ ပြီးတော့ငါတို့အများပြည်သူဆိုင်ရာဆုံမှတ်များ၊ ဆိုလိုတာကမြင်နိုင်ပြီးလက်လှမ်းမီသည့် Bitcoin node များဟုလည်းခေါ်ကြသည် နားထောင်ခြင်း node များ.
Bitcoin ကွန်ယက်၏အများဆိုင် node များ၏အနှစ်ချုပ်
ဟုတ်ပါတယ်, ရှားလော့လည်းရှိပါတယ် နားမထောင်သောဆုံမှတ်များဝှက်ထားသောနှင့်မမြင်ရတဲ့မိုင်။ ၄ င်းတို့သည် Tor ကဲ့သို့သော privacy protocols များကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်ရန် firewall နောက်ကွယ်တွင်ပုန်းကွယ်နေသည်။ သို့မဟုတ်ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ပို၍ လုံခြုံမှုရှိသော၊ ဆက်သွယ်မှုများကိုလက်ခံရန်၎င်းတို့ကို configure မလုပ်ရ။
Un နားထောင်ခြင်း node o စူပါ node ကို အများပြည်သူမြင်နိုင်သည့်အပြည့်အဝ node တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူနှင့်စကားပြောချင်သောအခြား node များနှင့် ဆက်သွယ်၍ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်သည်။ ဒါကြောင့် node နှစ်ခုလုံးကစူပါ node ကိုသုံးတယ် ဆက်သွယ်ရေးတံတား ထို အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်: စူပါ node ကိုတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအမှတ်.
အကယ်၍ သင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစူပါ node တစ်ခုဖြစ်လိုပါကအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၂၄ နာရီဆက်တိုက်ဆက်သွယ်မှုများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက်အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရမည်။ blockchain ၏သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကို၎င်းတို့၏အချက်အလက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရမည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး node များပေါ်မှာ။ ၎င်းသည်လူအနည်းငယ်သာအတွက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောစရာမလိုပါ။ လိုအပ်သောကွန်ပျူတာစွမ်းရည်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။
သတ္တုတူးဖော်ရေးအချိန်လွန်ပြီ မစပါနဲ့။ ယနေ့ Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အပြိုင်အဆိုင်ပါ ၀ င်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ကွက်များအားသတ္တုတွင်းလုပ်ရန်ကြိုးစားသည့် Bitcoin Core နှင့်အပြိုင်ပြေးသောအထူးပရိုဂရမ်များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မိုင်းလုပ်သား (သို့) ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့သူကတစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ် (မိုင်းတွင်းသာ) သို့မဟုတ်အုပ်စုများ (ရေကူးကန်သတ္တုတွင်း).
တစ် ဦး တည်းသောဝံပုလွေများအနေဖြင့်၊ သူတို့၏အဘွားကိုအိတ်များ အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာများနှင့်ပစ္စည်းများကိုခဏမျှအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည့်တွင်းနက်များကရေကူးကန်များရှိရေကူးကန်များတွင်၎င်းတို့ဒေသတွင်း download လုပ်ထားသော blockchain မိတ္တူကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ကြပြီးတစ်ယောက်ချင်းစီကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းကြတယ်။ရေတံခွန်) ။ သတ္တုတူးဖော်ရေးရေကူးကန်တစ်ခုတွင် node အပြည့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရေကူးကန်စီမံခန့်ခွဲသူကတစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည် အပြည့်အဝ node ကိုရေကူးကန်မိုင်းလုပ်သား.
Simplified Payment Verification (SPV) ဖောက်သည်များ၊ ဖောက်သည်များဟုလည်းလူသိများသည် ပေါ့ပါးတဲ့ ၎င်းတို့သည် Bitcoin ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသော်လည်း node အပြည့်အ ၀ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် SPV ဖောက်သည်များသည်ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူမပြုပါ: ၎င်းတို့သည် blockchain မိတ္တူတစ်ခုမလိုအပ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌သူတို့ကိုဘယ်သောအခါမျှမေးမည်မဟုတ်ပါ။
SPV client တွင်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည် - ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအားမည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှအချို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အချက်အလက်အားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုပဲစစ်ဆေးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သလဲ သူတို့ကအခြားအပြည့်အဝ node များမှသတင်းအချက်အလက်အချို့တောင်းဆိုကြသည် (စူပါ node များ) ။ ပေါ့ပါးသောဖောက်သည်များသည်ပြုမူဆောင်ရွက်သည် ဆက်သွယ်ရေးအဆုံးမှတ် နှင့် cryptocurrencies သိမ်းဆည်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောပိုက်ဆံအိတ် (ပိုက်ဆံအိတ်) ကအသုံးပြုကြသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ node အပြည့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အပြည့်အဝသတ္တုတွင်း node ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များသည်ငွေကြေးနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအလွန်အကျွံဈေးကြီးသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများဝယ်ယူရန်နှင့်သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည် (သတ္တုတွင်းတွင် Bitcoins တွင်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ပတ်သက်၍ လူမည်မျှညည်းညူသည်ကိုသတိရပါ) ။ မည်သူမဆိုအတည်ပြုနိုင်သော node ကိုအပြည့်အဝထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်အပြည့်အ ၀ အတည်ပြုသော node မရှိပါကတွင်းတူးသည်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ကွက်တစ်ခုအားသတ္တုတွင်းတူးရန်မကြိုးစားမီ၊ သတ္တုတူးဖော်သူသည်ဆိုင်းငံ့ထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအတည်ပြုရန်နှင့်အတည်ပြုရန်အပြည့်အဝ node တစ်ခုမှ ok ကိုလက်ခံရမည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သတ္တုတူးဖော်သူသည် (သတင်းအချက်အလက်များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အတူ) ၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်လျှောက်ထားပြီးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရှာဖွေရန်လျှောက်ထားသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤတွင် blockchain ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သတ္တုတူးဖော်သူသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့လျှင်၎င်းသည်ကျန် blockchain သို့ကူးစက်သွားပြီး node များအပြည့်အစုံသည်၎င်း၏တရားဝင်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သဘောတူခွင့်ပြုချက်စည်းမျဉ်းများကိုဖြန့်ဝေထားသောကွန်ယက်မှဆုံးဖြတ်ပြီးအာမခံသည် node များအတည်ပြုမိုင်းလုပ်သားတွေမဟုတ်ဘူး။
Bitcoin node များသည် P2P Bitcoin network protocol မှတစ်ဆင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်၍ အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်စနစ်၏သမာဓိကိုအာမခံသည်။ ကောင်းမွန်သောအပြုအမူမရှိသော၊ မရိုးမသားပြုမူသော၊ မှားယွင်းသော၊ မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပျံ့နှံ့စေရန်ကြိုးစားနေသည့်အပိုတစ်ခုရှိပါကအသို့နည်း။ blockchains များတွင်သတင်းစီးဆင်းမှု - ထို node ကိုရိုးရှင်းသော node များမှလျင်မြန်စွာမှတ်မိပြီး network မှချက်ချင်းပြတ်တောက်သွားသည်။
အပြည့်အ ၀ အတည်ပြုသော node ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှငွေရနိုင်မည်နည်း။ '
ကော်ဇောတစ်လုံး! စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများမရရှိပါ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူများ၏ယုံကြည်မှုကဆုံးဖြတ်ပြီး၎င်းသည်စိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်သုံးစွဲသူများအားသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ node အပြည့်အစုံမှာစစ်မှန်သောဂိမ်းဒိုင်လူကြီးများဖြစ်သည်။ သူတို့က blockchain ကိုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်လိမ်လည်မှုများမှကာကွယ်သည် နှစ်ဆအသုံးစရိတ်) ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်သူ့ကိုမှမယုံတော့ဘူး။
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(15150)
€ 24,90 (04/07/2022 00:11 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Naramaki® Anti Ants Vape ပိုးသတ်ဆေး - အထုပ် ၂ ထုပ်
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(130)
€ 6,38 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1252)
€ 12,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(518)
€ 47,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3347)
€ 9,50 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(361)
€ 37,99 (03/07/2022 20:19 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ယခင်ဆောင်းပါးBinance Coin (BNB) - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု၏ဇာတိသင်္ကေတ
လာမယ့်ဆောင်းပါးအဆိုပါ Blockchain ၏သမိုင်း
Gate.io Exchange Review 2021 သည် Bitcoin ကို ၀ ယ်ယူရန်လုံခြုံပါသလား။